Khombisa ukubhalwa okulungile kokuqukethwe kwe-World March
Ikhaya » Khombisa ukubhalwa okulungile kokuqukethwe kwe-World March
1 Izihloko Zesiqondiso Sokukhishwa Kwezindaba, Izindaba, Ukukhishwa Kwezindaba
1.1 Ifomethi yombhalo
1.2 Igama elingukhiye lokubhala okuqukethwe
1.2.1 Ukwazi kanjani uma igama elingukhiye ngokuvamile linesesho?
1.3 Izihloko Neziqu
1.4 Izixhumanisi kwamanye amawebhusayithi
1.6 Amavidiyo we-Youtube
1.7 Amanothi wokugcina
Izihloko Zesiqondiso Sokukhishwa Kwezindaba, Izindaba, Ukukhishwa Kwezindaba
Umbhalo kufanele ube nesakhiwo esincane esingenzeka, okungukuthi, lokhu kufanele kube okulula kakhulu ezingeni lezici zokwakha. Okusho ukuthi, ungasebenzisi amasayizi ombhalo ahlukile. Sebenzisa kuphela usayizi wombhalo ozenzakalelayo.
Into efanele ukuthi umbhalo ubamba kuphela:
Bold: ukugqamisa amaphuzu abalulekile
Omalukeke: okungenani okudingekayo, ngokuqokwa noma amagama ngolunye ulimi.
Izinhlu: zingabalwa noma zingabalwa. Izinhlu ezilula, ngamaphuzu noma izinombolo ezivela ku-1 kuya phambili.
Ukugwema: kugcizelela, imibala yombhalo, njll.
Uma umbhalo ubhaliwe ku-Word noma ku-Google Amadokhumenti, kubalulekile ukuguqula ibe yifomethi ye-HTML ngaphambi kokuyilayisha kuwebhu. Kulokhu kufanele usebenzise ithuluzi elifana nalokhu: https://word2cleanhtml.com. Ibeka wonke umbhalo ku-Word noma ku-Google Docs, futhi ibuyisela umbhalo ku-HTML. Khona-ke lowo mbhalo we-HTML udluliselwa kuthebhu ye-WordPress HTML yomhleli:
Igama elingukhiye lokubhala okuqukethwe
Lokhu kungenzeka ukuthi kuyinkimbinkimbi kunazo zonke zomhlahlandlela ukubhala okuqukethweKungakho ngizophakamisa ukuthi okuthile kube yisisekelo ngangokunokwenzeka nokuthi kwenziwe kakhulu ngangokunokwenzeka. Igama eliyisihluthulelo iqoqo lamagama aphakathi kuka-2 no-5 aphawuleka kakhulu futhi liphindwa kaningi esihlokweni. Isibonelo: uma indatshana ikhuluma ngeukhetho lomuntu eLa Coruña"Ngemuva kwalokho Leli lisethi lamagama angu-5 lingabhala ngokugcwele igama elingukhiye lendaba. Eqinisweni nje "iketanga lomuntu" linganele kulesi sibonelo. Ngokuvamile, okulungile ukuthi igama elingukhiye libe yinto abantu abavame ukuyifuna ku-Google.
Ukwazi kanjani uma igama elingukhiye ngokuvamile linesesho?
Sebenzisa ithuluzi le-Word Tracker: https://www.wordtracker.com/search (kumele ifakwe e-Territory, eSpain) Ngokuthola imiphumela, lokho ukusesha okungu-10, kwanele. Futhi ungasebenzisi igama elincane kakhulu, ngokwesibonelo: "ukuthula". Uma ungasakwazi ukusebenzisa i-Wordtracker ngoba weqe umkhawulo wokusesha, ungazama futhi Ubersuggest.
Ngokufanelekile, kufanele kube nemiphumela, kepha imiphumela emibi, ephakathi kwe-10 ne-500 ingalunga. Isibonelo: "imashi yezwe" yanele, ayiyinhle ngokweqile ngoba ine-10 kuphela, kepha yanele:
Ngakolunye uhlangothi, "ukuthula", "uthando", ... kubi kakhulu ngoba banezinombolo eziphakeme kakhulu, ngaphezu kwe-500:
Ngiyaqaphela ukuthi ngezinye izikhathi kunzima ukuthola igama elihambisana nalezi zinqubo. Uma ungatholi okuhambisanayo, akukho okwenzekayo.
Umgomo ukubeka leli gama eliyinhloko okungenani izikhathi ezingu-2 embhalweni ngaphandle kokubala izinhloko, noma amanye amaphuzu engizowaphawula ngezansi. Enye yeziphindaphinda zaleli gama eliyinhloko, kumele kube nesibindi.
Isihloko esiyinhloko (esivela ebhokisini ngenhla) kufanele sibe phakathi kwe-50 nezinhlamvu ze-75. Futhi kufanele ufake igama elingukhiye. Yingakho ngokuvamile kungumqondo omuhle wokukhetha igama elingukhiye, ubheke isihloko
Kubalulekile ukuthi umbhalo unamagama amaningana, okungenani isihloko sezinga le-2 (isihloko se-2 ku-Word). Okufanelekile, kufanele ube ne-1 noma izinombolo ezimbalwa ze-2 nabaphathi bezinga le-3.
Futhi Kunconywa beka umbhalo ongezansi esigabeni esingezansi kwesihloko esikhulu esithi "Faka umbhalo ongezansi lapha".
Ubukhulu be-subtitle bungaba bubanzi, ngokuqinisekile kunamagama we-121 ne-156, ngoba izosebenzisa incazelo ye-Meta. Futhi, kumele futhi ihlanganise igama elingukhiye.
Okokugcina, kufanele kucatshangwe ukuthi umnikazi we-3 (H3) kufanele abe ne-H2 ngenhla futhi kufanele okungenani kube nomnikazi oyedwa we-H1 ukuze anikeze leso sikhundla ngaso sonke isikhathi. H2> H2> H3.
Ngakho-ke, uma sibheka i-oda labaphathi uma ngokwesibonelo sinawo la ma-oda amathathu
H2 - H3 - H4 - H2 - H4: Kungaba iphutha ngoba i-H4 njalo kufanele yandulelwe yi-H3
H3 - H2: Kungaba okungalungile, ngoba i-H3 njalo kufanele yandulelwe yi-H2
H3 - H3 - H3: Kungaba kubi ngoba kufanele okungenani kube ne-H2 eyodwa
H2 - H3 - H4 - H4 - H2 - H3 - H2 - H3. Kungaba kuhle ngoba ukuhleleka kobukhosi kuyahlonishwa.
Ekugcineni, igama elingukhiye kufanele lihambe, ku-1 yezihloko zokuqukethwe (akunandaba ukuthi ku-Title 2 noma i-Title 3).
Zama ukungasebenzisi izixhumanisi eziphumayo, ngaphandle kwe-2 ngombhalo esiphezulu, nakuba kungcono i-1 kuphela.
Ngaphandle kokuthi kube isixhumanisi sangaphandle sekhasi elinedumela elikhulu ** , Uhlobo lwe-Wikipedia, iphephandaba elinamandla noma into enjengaleyo, faka ku-link njengoba QAPHELA kokukhethwa kukho:
Kubalulekile ukuthi zonke izihloko zixhumanise nakwezinye izingxenye zewebhu. Uma kungenzeki kuphi, ungakwazi njalo ukuxhumanisa nekhasi eliyinhloko.
Isibonelo: “Ekugcineni I-World March, sikwazile ukuya… ”
Esixhumaneni sangaphakathi, ungafaki i-NOFOLLOW.
** Uma ungazi ukuthi unedumela elikhulu noma cha, faka https://www.alexa.com/siteinfo bese ubeka i-URL yesizinda, isibonelo "namuhla.es".
Uma ukhona ngezansi kwe-100.000 ku-Global Rank, awudingi ukubeka i-NOFOLLOW. Kodwa uma kunjalo ngenhla, yebo udinga ukuyibeka.
Ngaphambi kokulayisha isithombe, khumbula lokhu:
Igama lesithombe kufanele libe lula, ngaphandle kwe- “ñ” (shintsha i-ñ ye-n), ngaphandle kwezikhala, futhi uma kunezikhala, zishintshe ngama-hyphens.
Uma ufaka isithombe, kufanele ugcwalise isihloko, I-Alternative Text kanye nezinkomba Zokuchaza. Ungafaka okufanayo ezigabeni ezintathu.
Asikho isithombe okufanele sidlule i-1000 px ngobubanzi.
Futhi Kubalulekile ukubeka isithombe esifakiwe. Uma ubeka isithombe embhalweni, ungasebenzisi isithombe esifanayo njengesithombe esifakiwe. Kungcono ukuthi ayikho isithombe emibhalweni, ukuthi ayikho isithombe esivelele. Esihlokweni, Umbhalo Ohlukile kanye Nokuchazwa kwesithombe esifakiwe, kubalulekile ukubeka igama elingukhiye.
Isayizi ekahle sesithombe esifakiwe siyi 960 x 540 noma isilinganiso se-16: 9. Ububanzi besithombe kumele bube phakathi kwe-600px no-1200px ngobubanzi.
Sebenzisa le shortcode:
[u_youtube_advanced url = "https://www.youtube.com/watch?v=MDvXQJgODmA" modestbranding = "yebo" https = "yebo"]
Kulula ukushintsha i-URL, ngokufanayo.
Njengengqinamba ethakazelisayo, lesi sihloko sigcwalisa zonke izidingo zokubhala okuqukethwe engikubeke lapha lapha kuhlanganise nemigomo yokusesha:
Lapha ngilungisile uhlu lokuhlola lwe-PDF olulandekayo kanye nezici ezibaluleke kakhulu ukungakhohlwa noma yikuphi.